Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay saraakiishii iyo askartii ku geeriyootay qaraxii Dhanaane – Radio Daljir
Diseenbar 6, 2018 5:56 g 1
bolka Shabeellaha Hoose.
Abdulqadir Tallman 5 months
Saraakiishan iyo askarta ku le’atay qaraxan waxaa masuul ka ah Farmaajo. Isagaa u hoosaasiyay cadawgooda oo askarta been u sheegay, geliyayna dagaal aanay dawladda Farmaajo daacad ka aheyn. Ciidankana bootada iyo beenta Farmaajo ayey rumeysteen.
Saa saraakisha iyo askarta Xoogga Dalka Soomaaliyeed laguma soo anqarinin, mana filayaan oo xataa kuma riyoodaan
taliyihiinaa guud = Commander-in-Chief of all the armed forces =(oo ah madaxweynaha) ayaa cadaw idiin hoosaasinaya.
Ciidamadan dagaal baa la geliyay iyadoo aan loo dhammeystirin qalabka, saanadda iyo hubka ay u bahan yihiin.
Ciidamadan taliyahooda guud — Commander-in-Chief oo ah madaxweynaha ayaa ku boorriyay dagaal aanay
Kharajkii loogu dhammeystiri lahaa saanaddooda, iyo qalabkooda iyo hubkooda waxaa loo adeegsadaa laaluush iyo faqfaq.
Arrinkan waa inuu reebaa natiijo uusan mahadinin Khaainka Farmaajo ah oo afar dekadood u saxiixay Itoobiya.
Khaainka Farmaajo ah oo mujaahid Cabdikariim Qalbi Dhagax u gacan geliyay Tigreeygii dhowaanta la inqilaabay.